Himalaya Dainik » ब्रा प्रयोगबारे ‘भ्रम’ र यथार्थ
ब्रा प्रयोगबारे ‘भ्रम’ र यथार्थ
झोलिएको भद्दा वा अस्वभाविक सानो स्त’नलाई आकर्षक मानिदैन । जबकी महिला सौन्दर्यकै एक हिस्सा हो स्त’न । त्यसैले अनाकर्षक स्त’नले समग्र सौन्दर्यमा असर गर्छ । ग’र्भावस्था, ह’र्मोनको उतार-चढाव र बढ्दो उमेरसँगै स्त’नको सौन्दर्य पनि फिका हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो ।
यद्यपि स्त’नको सौन्दर्य कायम राख्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले विभिन्न विधि अपनाउने गरिन्छ । कृतिम तरिकाले पनि स्त’न सुडौल बनाउन सकिन्छ । सर्जिकल विकल्प पनि उपलब्ध छ । यद्यपी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, प्राकृतिक तरिका । प्राकृतिक विधीबाट स्त न सुडौल बनाउन सकिन्छ यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
उचित साइजको ब्रा लगाउनुपर्छ । ब्रा को साइज सही हुनुपर्छ । जगिङ जस्तो व्यायाम गर्दा स्त’न झोलिने हुन्छ यस्तो बेला स्पोर्ट्स ब्रा लगाउनुपर्छ
उन्नत र पुष्ट स्त’नका लागि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ । शरीरलाई सहि पोश्चरमा राख्नुपर्छ । पोष्टिक भोजन नियमिन रुपले लिनुपर्छ । पुरा निन्द्रा लिनुपर्छ । मा’नसिक रुपले शान्त रहेर खुसी हुने प्रयास गर्नुपर्छ । साथै हातले गर्ने काम गर्नुपर्छ, जसले स्त’नको व्यायाम हुन्छ । स्त’नको मसा’ज गर्नुपर्छ । यसले अविकसित वा सिथिल स्त’न पुष्ट हुन्छ ।
स्त’नलाई आकर्षक बनाउनका लागि केहि व्यायाम वा योगासन हुन्छ । त्यस्ता व्यायामलाई विधिपूर्वक अभ्यास गर्नुपर्छ । पुशअप जस्ता व्यायामले छाती कसिलो र आक’र्षक बनाउन सकिन्छ । यससँगै उचित साइजको ब्रा लगाउनुपर्छ । ब्रा को साइज सही हुनुपर्छ । जगिङ जस्तो व्यायाम गर्दा स्त’न झोलिने हुन्छ यस्तो बेला स्पोर्ट्स ब्रा लगाउनुपर्छ ।
– पुशअप गर्दा केवल कुहिना मोड्नुपर्छ शरीरको अन्य भाग मोड्नु हुँदैन । शरीरलाई तल लाने र माथि उठाउने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
अभ्यास निरन्तर २०-२५ पटक गर्नुपर्छ ।
– अब शरीरलाई भित्तामा झुकाउने र उठाउने अभ्यास गरौं । यस किसिमको पुशअप ३५ देखि ४० पटक गर्नुपर्छ ।
कसरी म साज गर्ने ?
– अब माथिको हात तल र तलको हात माथि राखेर मा’लिस गर्ने ।
यसका लागि योग, व्यायाम, मसा ज । स्त नलाई सुडौल बनाउने आफ्नै किसिमको व्यायाम हुन्छ ।
१. व्यायाम गर्नुअघि स्पोर्टस् ब्रा लगाउनुपर्छ, जसले प्रत्येक जम्प वा स्टेपमा स्त’नलाई कसिलो बनाउँछ ।
२. पिठ्युको बलले सुत्नुपर्छ, यसले स्त’नको मांसपेशीलाई लाई कसिलो बनाइराख्छ ।
३. शरीरको मोटोपन घटबढ, हर्मो’नल परिवर्तन आदि कारणले स्त’न ठूलो वा सानो हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सहि
किसिमको ब्रा लगाउनुपर्छ । अर्थात फिटिङ्स ब्रा लगाउनुपर्छ ।
४. स्त’नमा चिसो पानी अर्था बरफले रगड्नुपर्छ, जसले यसलाई सिथिल हुनबाट बचाउँछ ।
५. छातीको मांस’पेशीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि पुश-अप राम्रो उपाय हो । नियमित रुपले पुशअप गरौं । सुरुमा
धिमा गतिमा र विस्तारै तिव्र गतिमा पुशअप गर्नुपर्छ ।
६. उत्तानो परेर सुत्ने । दुबै हातमा डेढदेखि पाँच किलोसम्मको तौल लिएर उठाउने र राख्ने अभ्यास गरौं ।
महिलाले ‘ब्रा’ प्रयोगबारे विभिन्न ‘भ्रम र यथार्थ’ !
ब्रा प्रयोगलाई लिएर हाम्रो समाजमा विभिन्न भ्र’महरु पनि छन् । जस्तो ब्रा लगाउँदा स्त न क्या न्सरको खतरा बढ्छ ।महिलाहरु स्त’नको आकार सानो भएमा फम सहितकको ब्रा लगाउनै पर्ने ठान्छन् । सामान्यतया महिलाहरुले आफूलाई आकर्षक देखाउन ब्राको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।महिलाहरुले ब्रा नलगाउँदा आफ्नो स्त-न खुकुलो हुने र स्त-नको आकार बि-ग्रने ठान्दछन् ।
तर, ब्रा को प्रयोगले स्त’न क्यान्सरको कुनै पनि ख’तरा नरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।९० को दशकमा गरिएको एक अध्यनले ब्रा प्रयोगले स्त-न क्यान्स-र बढ्ने देखाएतापनि पछिल्लो समय चिकित्सकहरुले ब्राबाट स्त-न क्यान्सरको कुनै ख-तरा नभएको बताएका छन् ।
तर यो जरुरी छैन । यो महिलामा भर पर्छ कि उनीहरु आफ्ना स्त-न कसरी देखाउन चाहन्छन् । यदि तपाइँ स्त-न ठूलो देखाउन चाहनु हुन्छ भने फम सहितको ब्रा लगाएपनि हुन्छ तर केही फरक पर्दैन भने ब्रा लगाउनु जरुरी छैन ।
महिलाहरुमा प्याडेड वा पुश अप ब्रा लगाउँदा स्त-न ठूलो हुने ठान्छन् । तर बास्तविकता केहो भने पुशअप ब्रा स्त-नलाई ठूलो देखाउन मात्र लगाउने हो । यो लगाउँदैमा स्त-न बढ्ने होइन् ।
कसिलो ब्रा लगाउनेलाई सम’स्या
कतिपय महिलाले साइजलाई वास्ता नगरिकन ब्रा खरिद गर्ने गर्छन् । सामान्य लाग्ने यस्तो ला’परवाहीले शरीरलाई धेरै असहज गरिरहेको हुन्छ । थाहै नपाई यही कारणले गम्भीर किसिमले गर्दन तथा ढाड दु-ख्ने हुन सक्छ । कतिपय महिला जानीजानी कसिलो ब्रा पहिरिरहेका हुन्छन् । तर, यसले गर्दा काँध, दु-ख्ने हातको पाता दु-ख्ने र गर्दनमा पनि दु-ख्ने गर्छ ।
कसिलो ब्रा लगाउँदा कस्तो स-मस्या हुन्छ ? ब्राले महिलाको स्त-नलाई छातीमै रहन सहयोग गर्छ । तर, धेरै कसिएको ब्रा लगाउँदा यसले छातीमा सहज तरिकाले रग-त सञ्चालन हुन दिँदैन ।
यसले टाउकोसँग सम्बन्धित ग-म्भीर रो-ग पनि लाग्न सक्छ । लामो समयसम्म कसिएको ब्रा पहिरिँदा काधमा दाद जस्तो गहिरो दाग बन्न सक्छ । जसले गर्दा चिलाउने र पोल्ने हुन्छ ।
लामो समयसम्म लगाउँदा काँधमा निलो डाम बस्ने र त्यसबाट दादको सं-क्रमण हुन सक्छ । नमिलेको ब्रा लगाउँदा स्त-नलाई सहयोग गर्नको सट्टा गर्दनमा दुखा-इ बढ्न जान्छ र ढाडमा बढी दबाब पर्छ ।
यसले टाउको र गर्दनमा जाने र-गतलाई रोकिदिन्छ । त्यसरी रोकेपछि टाउको दुख्ने स-मस्या आउँछ । कहिलेकाहीँ नमिलेको ब्रा र अन्ड-रवेयर लगाउँदा टाउको, छाती, ढाडको हड्डीमा पनि अ-सर पर्छ ।
हड्डीमा अस’र गर्दा कहिलेकाहीँ श्वासप्र-श्वासमा पनि स-मस्या हुने गरेको पाइन्छ । गल’त साइजको ब्रा लगाउँदा पेटलाई पनि खराब गर्छ । कसेर लगाइने ब्राले डायफ्रममा दबा’ब पर्छ र पाचन प्रणाली सहज नहँदा पे’टमा अ’सर गर्दछ ।
कहिलेकाहीँ हात या गर्दनमा हल्का सुइले घो’चेकोजस्तो दुखाइ पनि हुनसक्छ । यो सम’स्या ग’म्भीर हुनसक्छ । यसको प्रमुख कारण गल’त तरिकाले ब्रा लगाउनु नै हो ।
एउटा शोधले यस्तो बताएको छ कि महिलाको छातीसँग जोडिएको दुखाइ प्राय: गरेर क’सेर लगाइने ब्रासँग सम्बन्धित छ । यसको कारण अर्को पनि देखिएको छ, जुन बसाइको तरिकामा भर पर्छ । ग’लत तरिकाले ब्रा’ लगाएर बस्दा गर्दन तलतिर झु’क्छ र धेरै प्रकारका स’मस्या देखिन्छन् ।
ब्रा र पे-न्टी खोलेर सुत्नुका फाइदा
तर त्यही बस्त्र सुत्ने बेला लगाउदा स्वास्थ्य स’मस्या आउन पनि सक्छ । दिनमा ब्रा र पेन्टी अनिवार्य लगाउने र राति खोल्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । भित्री वस्त्र खोलेर सुत्नुका केही फाइदा
ब्रा पे’न्टी कसिलो हुने भएकाले यसले र’क्तसञ्चारलाई सुचारु हुन दिँदैन, जसले दीर्घकालमा अनेक स्वास्थ्य स’मस्या निम्त्याउन सक्छ ।
ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा इलास्टिकले छालामा रातो दाग लगाउँछ । पछि यस्तो दाग कालो बन्न पुग्छ । ग’र्भवती अथवा स्त’नपान गराउने महिलाले भने सुत्दा खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ ।
ब्रा र पे’न्टी खोलेर सुत्दा गहिरो निद्रा पर्छ । किनकि, यसरी सुत्दा शरीरले खुकुलो महसुस गर्छ । यसले गर्दा श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार दुवै सुचारु अवस्थामा रहन्छ र निद्रा पर्छ ।
ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा र’क्तसञ्चार र श्वासप्रश्वासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा शरीरका कोषमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युट्रिसन्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर थकित हुन्छ ।
स्त’नसम्बन्धी रोग लाग्दैन
टा’इट ब्रा लगाएर सुत्ने महिलामा स्त’न सु’निने, स्त-नमा पानी जम्नेजस्ता सम-स्या देखिन सक्छन् । राति सुत्दा ब्रा खोलेर सुत्ने गरेमा यस्तो स-मस्या देखिँदैन ।
क्या-न्सरको जो-खिम कम
कँसि-लो ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीलाई स्त-न-को क्यान्सर लाग्ने जो-खिम बढी हुन्छ । कँसिलो ब्राले स्त-न वरिपरिको भागमा रक्तसञ्चार सुचारु हुन दिँदैन । जसले गर्दा क्यान्स-रको जो-खिम बढ्छ ।
सुत्दा पसिना आउने गरेको छ भने भित्री वस्त्र खोलेर सुत्नाले पसिना कम आउँछ ।